Maherifo WTN hitarika ny fizahantany ao Barbados: Jens Thraenhart, ny CEO vaovao an'ny BTMI
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Barbados » Maherifo WTN hitarika ny fizahantany ao Barbados: Jens Thraenhart, ny CEO vaovao an'ny BTMI
Vaovao Mafana Barbados • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! • Vaovao • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • malaza ankehitriny • WTN
Toerana manokana i Barbados, ary ny Barbadianina dia olona miavaka tokoa izay manana tantara maro hotantaraina. Nampahafantarina androany ny mpitantara tantara lehibe. Jens Thraenhart, izay handray an-tanana ny Barbados Tourism Marketing (BTMI) hatramin'ny 1 Novambra, ara-potoana amin'ny tsenan'ny World Travel Market.
Efatra herinandro lasa izay, Kanadiana / Alemanina Jens Thraenhart dia notendren'ny tambajotran'izao tontolo izao momba ny fizahantany.
Nandritra ny taona maro dia Andriamatoa Thraenhart no talen'ny fizahan-tany momba ny fizahan-tany any Mekong ary ny herinandro lasa teo dia tany Bangkok, Thailand no nipetraka.
Androany dia voatendry hitarika ny fizahantany Barbados i Jens Thraenhart
Ankehitriny ilay lehilahy fantatra amin'ny anarana hoe Andriamatoa Mekong dia ny Lehiben'ny Executive Executive Barbados Tourism Inc. (BTMI).
Avy any Bangkok ka hatrany Barbados, ity dia ho faritra vaovao ho an'i Jens Thraenhart sy ny fianakaviany.
Izy dia Jens Thraenhart, veteranin'ny fizahan-tany nandritra ny 26 taona, izay "nipoitra ho kandidà voalohany avy amina filatsahan'ny kandidà 178 voalohany manana ny fahaizana matihanina manerantany" hoy ny fikambanana tamin'ny famoahana azy.
Manana traikefa an-taonan'ny fitsangatsanganana iraisam-pirenena, fizahan-tany, ary fandraisana vahiny mandritra ny 25 taona mahery izy, eo amin'ny sehatry ny asa, marketing, fampandrosoana ny orinasa, fitantanana vola miditra, fandrindrana stratejika ary e-asa. Tany am-piandohan'ny asa aman-draharahany dia nohamafisina ny fananganana orinasa Jens niaraka tamin'ny nananganana orinasa mpanamboatra sakafo mahomby, nanangana orinasa Internet fitsangatsanganana an-tsehatra any New York, ary nitantana toeram-pilalaovana golf tsy miankina mahaleo tena any Alemana.
Tamin'ny 2014, Jens Thraenhart dia notendren'ny Minisiteran'ny Fizahan-tany any Thailand, Vietnam, Kambodza, Laos, Myanmar ary Sina (Yunnan sy Guanxi) hitantana ny birao mandrindra ny fizahan-tany any Mekong (MTCO) ho talen'ny Executive. Tamin'ny taona 2008 dia niara-nanorina orinasam-barotra nomerika China Trail nahazo ny loka Dragon Trail izy, ary nitarika ekipa tetikady marketing sy Internet miaraka amin'ny Vaomieran'ny Fizahan-tany any Kanada sy ny Fairmont Hotels & Resorts. Nanomboka ny taona 1999 dia izy no CEO an'ny Chameleon Strategies.
Nianatra tao amin'ny Oniversite Cornell niaraka tamin'ny Masters of Management nahazo fankatoavana MBA, ary Bachelor of science niaraka tamin'ny University of Massachusetts, Amherst, ary ny University Center "Cesar Ritz" ao amin'ny Brig, Switzerland, Andriamatoa Thraenhart dia nekena ho iray amin'ireo ny kintana miakatra 100 avo indrindra amin'ny indostrian'ny fizahan-tany nataon'ny Travel Agent Magazine tamin'ny taona 2003, dia voatanisa ho iray amin'ireo sain'ny mpivarotra sy fivarotana haino aman-jery 25 an'ny HSMAI amin'ny fampiantranoana olona sy fitsangatsanganana tamin'ny 2004 sy 2005, ary voatendry ho iray amin'ireo sain-tsarimihetsika 20 tsy mahazatra amin'ny fitsangantsanganana eropeana ary fandraisam-bahiny amin'ny taona 2014. Mpikambana ao amin'ny UNWTO izy, mpikambana ao amin'ny Birao PATA, ary filohan'ny PATA Sina taloha.
Andriamatoa Thraenhart dia manana toe-tsaina eran'izao tontolo izao.
Manomboka amin'ny 1 Novambra ny fanendrena ho an'i Barbados.
Tsy niasa tany Karaiba mihitsy i Jens fa nitondra mpitondra manerantany ho an'i Barbados ary faritra Karaiba miankina indrindra amin'ny fizahan-tany.
Juergen Steinmetz, filohan'ny Tambajotra fizahan-tany manerantany, dia iray amin'ireo voalohany niarahaba an'i Jens tamin'ny toerany nilaza hoe: “Fotoana tsara tena tsara tsy ho an'i Jens ihany io, fa ho an'i Barbados sy ho an'ny Karaiba. Fantatro nandritra ny taona maro i Jens. Mety tsy safidy tsara kokoa io. ”
Jens dia mpikambana ao amin'ny Tambajotra fizahan-tany manerantany ary vao 4 herinandro lasa izay no nahazo ny Maherifo fizahan-tany loka nomen'ity fikambanana manerantany ity.
“Andro tsara ho an'i Barbados sy ny tontolon'ny fizahan-tany ity.”
Barbados Tourism dia nilaza hoe: "Ity fanambarana ity dia hampiditra vanim-potoana vaovao ho an'ny fikambanana, izay hahita ny tetezamita BTMI ho lasa orinasa ara-barotra ara-barotra bebe kokoa izay manova ny asany mba hifaninana amin'ny vanim-potoana pandemika vaovao amin'ny fizahan-tany manerantany."
Jens no filoha lefitra faha-2 an'ny Birao mpikambana ao amin'ny Fikambananan'ny fizahan-tany manerantany (UNWTO) ary niasa tamin'ny birao indostrialy anisan'izany ny Pacific Asia Travel Association (PATA), ny Association Sales and Marketing Marketing (HSMAI), ary ny International Federation an'ny IT sy Travel & fizahan-tany (IFITT), mitondra fifandraisana lehibe amin'ireo mpiray antoka amin'ny tsena kendrena lehibe ho an'ny fizahan-tany any Barbados.
Ny talen'ny BTMI Roseanne Myers dia nilaza fa ny fikambanana dia efa nanao asa lehibe hanokafana ny tsena sy hametrahana fifandraisana ara-barotra.
“Mino izahay fa miaraka amin'ny traikefa fizahan-tany iraisam-pirenenan'i Jens, voaporofo an-tsoratra momba ny fanatanterahana ny paikady sy ny fomba fijerin'ny mpandraharaha, ny BTMI dia hipoitra avy amin'ity vanim-potoana mararin'ny pikatom-piavotana ity izay orinasa matanjaka be toerana sy avo lenta izay mitondra tombony bebe kokoa amin'ny indostria ary ny toekarena misimisy kokoa, "hoy izy.
"Nandray ny fanamby izahay hitady ny kandidà tsara indrindra amin'ny toeran'ny CEO mba hanampy amin'ny famolavolana ny lalana mankany ivelany, ary tena faly izahay nanao izany, taorian'ny fizahana mangarahara sy mangarahara. Tongasoa eto amin'ny ekipan'i Barbados i Jens. ”
Barbadiana roapolo sy 27 avy any Karaiba midadasika no isan'ireo mpangataka 178. Ny fizotry ny fikarohana sy ny fisafidianana dia notontosain'ny Profiles Caribbean Inc. ary komity sub-komity an'ny matihanina amin'ny indostria. Ilay masoivoho koa dia nanao fanentanana mavitrika amin'ireo mpiara-miombon'antoka amin'ny faritra sy iraisam-pirenena ao amin'ny BTMI.